छत्र लकाई खड्काको मनै छुने लघु कथा: 'सौतेनी आमा' - USNEPALNEWS.COM
लेखक: छत्र लकाई खड्का, मलेसिया…
<<<<<<<<<< लघु कथा>>>>>>>>>>
कुरा केही बर्ष अगाडि को हो सुनिता र गिता कि आमाको मृत्यु भएको ३ महिना नबित्दै उनका बाबु रमेशले अर्को बिबाह गरेका थिए । बिचरा सुनिताको उमेर मात्रै ३ बर्षको थियो । उनकि बहिनी गिताको उमेर मात्रै १८ महिनाको मात्रै थियो । यानिकि गिताले त आमाको काखमा बसेर घुटुघुटु आमाको दुध पिउने गरेकि थिइन । तर यस्तो होला भनेर कसैले कहिल्यै पनि सोचेको पनि थिएनन । दैबको लिला कसलाई के थाहा ? बाबु ले सौतेनी आमा बिहे गरेर ल्याएको केही दिनमात्रै हुदैथ्यो सुनिता र गिताका दिदीबहिनी हरुलाइ सौतेनी आमाको केही व्यवहार देखेर कहिलेकाही त घर छेउको दुधिलो को रुख मुनि बसेर बहिनी लाई काखमा च्यापेर सुनिता आमा आमा भनेर चिच्याने र रुने मात्रै गर्थिन । दिदीले यसरी रोएको देखेर बहिनी गिता पनि दिदीकै सारमा रुन्थिन । उनिहरु सौतेनी आमाको व्यवहार देखेर एकदमै दुखित भएका थिए ।
भोक लाग्दा समेत भात खान समयमा नपाउने उनिहरुकी सौतेनी आमाले यस्तै गर्थिन । एकदिन को कुरा हो सुनिता कि बहिनी गितालाई एकदमै भोक लागेर माम माम खाने भनेर रोएको रोए गरिछन अनि दिदी सुनिता ले बहिनी लाई सौतेनी आमाले पकाएर अगेनाको छेउमा राखेको भात र बिहानै बाबुले भैसि दुएर राखेको दूध मझेरीको थामबाट दुधेर बाट गिलासमा अलिकति निकाल्न लागेकि थिइन सुनिताले तर त्यहीँ बखत बाहिर घाँसको भारि बिसाएको आवाज आएको थियो । सुनिता एकदमै डरले लगलग कामिरहेकि थिईन । त्यही बखत सुनिता कि सौतेनी आमा हसिन र पसिन भएर घरभित्र छिरिन अनि गिताले दुध भात खाएको देखेर भनिन: ”मर्न नसकेकि काल म खोलाबाट मरिमरी घाँस काटेर बडेमान को भारि ल्याउने त सौता कि छोरीले यसरी दुध भात बसिबसी खाने ?” अनि सुनिता लाई त सङ्गघारे ले दिएकि होस् भनेर गालामा एक चड्कन हानिन् । सुनिता मरेनि आमा भनेेर रुदै थिइन बहिनी गिता पनि चिच्याएर रुन थालिन् ।
बिचरा सुनिता ले गितालाइ फकाएर नरुन भन्छिन् त्यहीँ बखत उनिहरुका बुबा सुरेश घरमा टुपलुक्कै आइपुगे । छोरीहरू लाई सोधे के भयो ? नानीहरू किन यसरी रोइरहेका नि? सुनिताले बाबुको मुखमा हेरेर आफ्नो कुरा खोल्ने संकेतले सौतेनी आमाले हतारहतार यिनीहरू लाई चकचक नगर्नु भनेको मरे टेर्ने होइन । दिदी ले बहिनीलाई बुइकलमा लडाइछे नि हेर्नुस् त तपाईंका छोरीहरू को बदमाश पनि कति हो कति । बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दैथियो सुनिता कि सौतेनी आमाले छोरा जन्माइन । सुनिता र उसकि बहिनी हरुपनि खुसिभए घरमा जेजस्तो भएपनि भाइ जन्मियो भनेर । यतिकैमा सुनिताका दिदीबहिनीहरुलाई उनका बाबु र सौतेनी आमाले स्कुलमा पठाउने कुनै कुरा पनि गरेरन् । एकदिन सुनिता ले सौतेनी आमा लाई भिनन् हामी दिदीबहिनी हरुलाई किन स्कुलमा नपठाउने आमा ? सौतेनी आमा को कडा उतर आयो चुपचाप बाख्रा लिएर जङ्गलमा चराउन जान्छेस कि तेरो खुट्टा भाचौं ह ? यतिभनेर हफ्काउदै बाख्रालाई खोर बाट निकाल्दै बाटो लगाइदिन् । बिचरा सुनिता ११ र गिता ९ बर्षका भइसकेका थिए । यस्तै यस्तै गरेर समय बित्दै गयो । सुनिता कि सौतेनी आमाको छोरा पनि ४ बर्षको भएको थियोउसलाई बोर्डिङमा हालियो । बिचरा सुनिताका दिदीबहिनी हरुको मन एकदमै कुडियो । यस्तै यस्तै समय बित्दै गयो सुनिता पनि १८ बर्षकि भइन । उनलाई बिबाह गर्नलाई पारी गाउँको मुखियाको नाति लाई लिएर मुखिया आएछन् । नभन्दै सुनिता लाई पनि केटा मन परेछ सबैले केटाकेटी लाई सोधेँ केटालाई पनि केटी मन परेछ अनि त्यहीँ दिन सुनिताका बाबुले उनिहरुको फुलमाला पनि गर्दिए ।
अर्को महिना बिहे गर्ने दुबैपक्ष तमतयार भए । एक महिना बित्नलाई कतिबेर लाग्थ्यो र अर्को महिना उनिहरुको धुपधामका साथमा बिहे भयो । यता बहिनी गिता लाई घरमा गाई बाख्रा चराउने र भाइका लुगाफाटो धुने मात्रै काम दिएकि थिइन् सौतेनी आमा ले । एकदिनको कुरा हो गिता बिहानको खाना खाएर सधैंको जस्तै गाई बाख्रा चराउन लाई जङ्गल गएकि थिइन् । उनी गाई बाख्रा चराउने जङ्गलमा एउटा ठुलो भिर थियो । गिता लाई त्यहीँ भिरको छेउमा बसेर आफ्ना गाई बाख्रा हरुलाइ नियालेर हेर्दै थिइन् । तर अचानक उनलाई रिगटा लागेको जस्तै भयो । उनी एक्कासी लडीन तल झरीन, पछी भिरको बिचमा रहेको ढुङ्गामा उनको शरिर मृत्यु भएको अबस्था मा भेटीयो । गाउँमा पुरै रुवाबासी भयो तर उनकि सौतेनी आमाकोआँ खाबाट एक ढिक्का पनि आशु आएनन् । सबै गाउँलेहरु मिलेर गिता लाई दाहासंस्कारका लागि नजिकैको खोलामा लगे । उता दिदी सुनिता लाई थाहै दिइएन । पछि ३ दिन पछि मात्रै थाहा भएछ र रुदै कराउँदै माइतीघर आइछन ।बहिनी गितालाई सम्झिएर नराम्ररी रुदै बिगत लाई सम्झिएर भाब बिहोल भैईछिन ।